सबैले पढ्नुपर्ने आई लभ यु को परिभाषा | Cute Adina
डा. योगी विकासानन्दको नामसँग धेरै जना परिचित छन् । उनका प्रवचनहरु सुन्ने बानी परेकाहरु पनि कम छैनन् । नेपाल मनोक्रान्ति योगका अगुवा डा. योगी विकासानन्दले सकारात्मक सोचमा जोड दिँदै आएका छन् । सफलता सुत्रहरु सिकाउँदै आएका उनका वाणी धेरैलाई मन पर्छन । आई लभ यु अर्थाम म तिमीलाई माया गर्छु । यो शब्द धेरैले प्रयोग गर्ने गरेको शब्द हो । मायामा परेकाहरुको त यो शब्द थेगो जत्तिकै मुखमा झुण्डिने गरेको छ । तर, यो शब्दको गहिराई बारे कमैले सोच्ने गरेका छन् । डा. योगी विकासानन्दले आई लभ युलाई यसरी परिभाषित गरेको छ ।
जब हामीले कसैलाई आइ लब यु भन्छौँ, दुर्भाग्य यहिँबाट शुरु हुन्छ । किनकी आई एउटा अहंकार हो र यु अर्को अहंकार हो । यो दुई अहंकारकोबीचमा लब टिक्नै सक्दैन । दुई तिरबाट आइ र यु ले थिचेपछी बिचरा लब को सत्यानास हुन्छ । आइ ले एकातिर बाट र यु ले अर्को तिर थिचेपछी प्रेम कहिले शुलीमा चढ्छ थाहै हुँदैन । त्यसैले त्यो निर्दोश लब को हत्या आई र यु ले नै गर्ने गर्छ । लब हमेशा निर्दोष हुन्छ । कुनैपनि चिजलाई दुई तिरबाट थिचेपछि के हुन्छ ? विचार गर्दै गर्नुहोला ?
आइ भनेको म र यु भनेको तिमी , अर्थात केटा र केटी । अनि बिचमा प्रेम । त्यसैले हरेक प्रेमी प्रेमिका गधा हुन गधा । अहंकारको भारी बोक्ने गधा । किनकी प्रेम को त भार नै हुदैँन । अहंकारको भार दुवैजनाले बोक्छ र प्रेमलाई शुलिमा चढाइदिन्छन । के के सोच्छन, सोच्छन त्यो बेला, प्रेममा भावुकता हुन्छ यो सत्य हो, तर त्यहा बौद्धिकता पनि हुनुपर्दछ नत्र पतन हुन्छ मान्छे । भावुकतामा यसरी बग्छन कि मान्छे होस हवास सबै गुमाउन पुग्छन । अनि पछि पश्चात्ताप बाहेक केही रहँदैन । त्यो काँचो आँप खान खोज्नुको परीणाम हो, काचो आँप खान खोज्नुभयो भने बिरामी पर्नुहुन्छ । किनकी समयभन्दा अगाडि हात परेको कुनै पनि कुराले दुख निम्त्याउँछ ।